Bolivia: Obeliska simenitra sy balaonina feno rano mangatsiaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2018 7:46 GMT
Mahita ny hevitra ho tsy misy fotony i Fadrique Iglesias Mendizábal. Tao amin'ny bilaoginy El Clavo en el Zapato [ES] (Ny fantsika eo amin'ny kiraro), nilaza izy fa tsy manampy ny tolo-kevitra.
Evelin Torrico, mponina ao Santa Cruz, niverina vao haingana tao querida llajta (tanindrazana malala) sy ny fitsidihany isan-taona any Cochabamba. Anisan'ny mampiavaka azy manokana ny habetsahan'ny sakafo sy fahafahana misakafo – hatramin'ny enina isan'andro. Nanoratra tao amin'ny bilaoginy, Mis Locuras [ES] izy fa ahitana tanàna madinika ao, izay tsy dia lavitra aleha ny zava-drehetra. Na izany aza, miaiky ihany koa izy fa eny ivelany mahomby tanteraka ny balaonina rano mitarika mankany amin'ny Karnavaly.
Ireo bilaogera roa ireo dia nanoratra momba ny tanànany ao Cochabamba, iray amin'ireo foiben-drenivohitra lehibe ao anatin'ny firenena. Bilaogera iray hafa antsoina hoe Joup no niditra vao haingana tamin'ny kisendrasendra tao an-tanàna kely antsoina hoe Urubichà ao amin'ny departemantan'i Santa Cruz, izay mikasika ny tetikasa momba ny orkesitra sy tarika malaza avy any amin'ny faritra. Feno tamin'ny fiara fitateram-bahoaka efa simba, mpiantsehatra mahaliana izay nipoitra avy ao anaty sy ivelan'ny fiara fitaterana izay toa nijanona isaky ny kilaometatra vitsivitsy mba haka mpandeha vaovao, sy ireo mpikambana ao amin'ny FELCC (Hery manokana manohitra ny heloka bevava) aka ny polisy, ary saika nisy lozam-pifamoivoizana, tonga ihany tany amin'ny toerana nalehany i Joup sy ny mpiara-dia taminy.
Farany, Marco, bilaogera monina ao Tarija avy ao amin'ny Pandemónium [ES] nanoratra fehezan-teny iray mikendry hiteraka adihevitra. Manontany izy hoe, “Ahoana raha maty androany i Evo (Filoha Morales)?” Vokatr'izany, fanehoan-kevitra am-polony na mihoatra no namaly tamin'ny fijerin'izy ireo momba ny zava-misy mety hitranga. Ny sasany kosa natahotra fa ny filoha lefitra ankehitriny Alvaro Garcia Linera dia mbola mety ho ratsy kokoa ho an'ny firenena. Ny sasany namazivazy fa mety hiverina hanangatra ny matoatoan'i Morales, raha matahotra ny baranahiny tanteraka kosa ny hafa.
Tamin'ity fotoana ity, tamin'ny taon-dasa: Taorian'ny fanehoan-kevitra manontany raha mikasika ny politika ihany ny lahatsoratra bilaogy Boliviana rehetra, hijery ny sasany amin'ireo karazana bilaogy Boliviana isika. Mandray anjara goavana amin'ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogy Boliviana ny bilaogy haisoratra, teknolojia ary sary.